June 2020 - Page 45 of 45 - ShwengweGames
(၁၆)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်
June 1, 2020 by Shwengwe Games
………… ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် ………
(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္
………… ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ………
ဒီနေ့မှာတော့ ညီမတို့ ကိုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေစတင် ပေါ်ပေါက်လာချိန်ကတည်းက ဒီနေ့အထိကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေအကြောင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ Hotel Del Luna (2019)
IU နဲ့မင်းသား Yeo Jin Goo တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သဘာဝလွန်ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်နဲ့ IU ရဲ့ ဖက်ရှင်တွေဟာ ဒီစီးရီးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုနှုန်း ၈.၉% နဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး အဆင့် ၁၀ မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
၉။ 100 Days My Prince (2018)
EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. နဲ့ မင်းသမီး Nam Ji Hyun တို့ပါဝင်ထားတဲ့ ရှေးခေတ်နောက်ခံ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ tvN ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး လူကြီးလူငယ်အကုန်ကြိုက်နှစ်သက်တာမို့ ကြည့်ရှုနှုန်းကတော့ ၉% ကျော်ခဲ့ပါတယ်။
၈။ Hospital Playlist (2020)
မကြာသေးမီကမှ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဆရာဝန်သူငယ်ချင်းတစ်စုရဲ့ကြားက သံယောဇဉ် အချစ်နဲ့ဘဝကို သဘာဝကျကျရိုက်ကူးထားတာမို့ ကြည့်ရှုနှုန်း ၉.၉% နဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးမကြာခင်မှာပဲ ဒီစာရင်းထဲကို ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
၇။ Itaewon Class (2020)
နာမည်ကြီး webtoon ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့တဲ့အပြင် မင်းသား Park Seo Joon နဲ့ မင်းသမီး Kim Dami ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းအတော်လေးကောင်းတာကြောင့် ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၁.၈% တောင် ရခဲ့ပြီး အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။
၆။ Crash Landing on You (2019)
မြောက်ကိုရီးယားဗိုလ်ကြီးနဲ့ တောင်ပိုင်းကသူဌေးမမတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ rating ၁၂.၂% ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်တန်းမင်းသားနဲ့ မင်းသမီးရဲ့ တွဲဖက်မှုအစွမ်းကတော့ အံ့မခန်းလို့သာ ဆိုရတော့မှာပါ။
၅။ Reply 1988 (2015)
၁၉၈၈ ခုနှစ်က သူငယ်ချင်း မိသားစုကြားက သံယောဇဉ်တွေကို လွမ်းမောဖွယ် ပြန်ပြောင်းရိုက်ကူးထားပြီး ရသမျိုးစုံခံစားစေရမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၂.၄% နဲ့ နံပါတ် ၅ နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။
၄။ Sky Castle (2018)
မိသားစုအရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေရဲ့ ဘဝကို ဒရမ်မာဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားပြီး ရင်သပ်ရှုမောရမယ့် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်နဲ့ စီးရီးကောင်းတစ်ခုပါ။ ကြည့်ရှုနှုန်းအနေနဲ့ ၁၂.၅% ရှိပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
၃။ Goblin (2016)
အားလုံးနှစ်သက်ကြတဲ့ မှင်စာဦးဦး Gong Yoo နဲ့ သတို့သမီးလေး Kim Go Eun ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကြားက chemistry နဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကောင်းမွန်မှုကြောင့် rating ၁၂.၉% တောင်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။
၂။ Mr.Sunshine (2018)
မင်းသားကြီး Lee Byung Hoon ပါဝင်ပြီး ၁၈၇၁ ခုနစ်က အမေရိကန်ရောက် ကိုရီးယားအစေခံတစ်ဦးရဲ့ဘဝကို နိုင်ငံရေးရှုထောင့်တွေကပါ စေ့စပ်စွာရိုက်ကူးထားတာမို့ တကယ်ကိုကောင်းပြီး ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၃% ရခဲ့ပါတယ်။
၁။ The World of the Married (2020)
အိမ်ထောင်ရေးအရှုပ်အရင်းတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်မှုတွေ လူ့သဘောသဘာဝတွေကို အပြင်မှာဖြစ်နေသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရိုက်ပြထားလို့ အမျိုးသမီးတိုင်း စောင့်ကြည့်ခဲ့ရတာမို့ ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၆.၉% နဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးပါပဲ။
Source: Summit media
Credit Myanmar Cele Bar page
လိင်တူသဘောကျတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းက နာမည်ကျော်အနုပညာရှင် (၄) ယောက်
အရင်ခေတ်က လိင်တူချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကို သဘောမကျကြပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ဒါဟာသဘာဝတရားတခုဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာကြပါပြီ။ အနုပညာရှင်တွေဆိုတာလဲ သာမာန်လူသားတွေပဲဖြစ်လို့ လိင်တူချစ်ကြိုက်သူတွေပါဝင်နေပါတယ်။ အခုပြောပြပေးမှာကတော့ LGBT အနုပညာရှင်တွေထဲက နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တချို့ကိုပြောပြပေးမှာပါ။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့အနုပညာရှင်ပါနေလားဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ပထမဆုံးတယောက်ကတော့ ပေါ့ဘုရင်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်တဲ့ ပဲရစ်ဂျက်ဆင်ပါ။ သူမဟာ မိန်းကလေးအချင်းချင်းသဘောကျသူဖြစ်ပြီး ဒါကို သူမအသက် ၁၄နှစ်ကတည်းက စသိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကလဲ တခြားမိဘတွေလိုသူမကို တားမြစ်ကန့်ကွက်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါ တယ်။ သူမဟာ လိင်တူချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူမကိုယ်တိုင်တရားဝင်လူသိရှင်ကြားပြောပြထားတဲ့ အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်ကိုတော့ ဒစ်စနေရဲ့ ဟန်နာမွန်တနာဇာတ်ကောင်နဲ့သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူမက သရုပ်ဆောင်အပြင် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေးအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ပါ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမကို သူမ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုလဲကျားမခွဲခြားဝတ်ဆင်တာမျိုးမလိုဘူး ကျွန်မအတွက်က အတူတူပဲလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင့် Happy Hippie ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီး လိင်ပြောင်းလဲသူများကို ဂုဏ်ပြု တဲ့လှုပ်လျားမှုတွေလဲ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ကေပေါ့အဆိုတော် ကိုရီးယားစူပါစတား ဆွန်ဟေးကတော့ ၂၀၁၉ သြဂုတ်လက အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ဖန်တွေကို သူမရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ နှစ်ယောက်တွဲပုံတင်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သူမရဲ့ ဖန်တယောက်က သူမကို လိင်တူချစ်သူလားလို့မေးတဲ့အခါ သူမက “ကျွန်မက လိင်တူချစ်သူလေ ကျွန်မမှာ ကောင်မလေးရှိတယ်’’ လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖန်တွေတော်တော်များများက သဘောကျပေမယ့် မုန်းတီးဒေါသထွက်နေတဲ့ ပရိသတ်တချို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Black Eye Peas အဖွဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖာဂီက စူပါသရုပ်ဆောင် Josh Duhamel နဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၁၉ မှာတော့ ကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။ သူမက သူမဟာအမျိုးသမီးတွေကိုလဲ သဘောကျကြောင်း၊ အမျိုးသမီးတချို့နဲ့လည်း အတူတူနေခဲ့ဖူးလို့ပြောပါတယ်။ ဒါကို ရှက်စရာလို့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ကျမကအရည်အချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်လေလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆရာမင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)၏၂၀၂၀ ဇွန်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန်(၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
၂၀၂၀ ဇွန်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန်(၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။
အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေများ ၊ မိုးစက်မိုးပေါက်များကြောင့် ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသော မိုးဦးကာလ ဇွန်လ၏နေ့ရက်များ
Categories ဗေဒင် ယတြာ